कलेजको अवलोकन भ्रमणमा उपकुलपति जियोफ | गृहपृष्ठ
Home बजार कलेजको अवलोकन भ्रमणमा उपकुलपति जियोफ
on: July 12, 2019 बजार
कलेजको अवलोकन भ्रमणमा उपकुलपति जियोफ
काठमाडौं (अस) । बेलायतस्थित उल्भरहेम्टन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. जियोफ लेयर आनो विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका नेपालका दुई कलेजको अवलोेकनमा आएका छन् । उक्त विश्वविद्यालयबाट काठमाडौंको हेराल्ड र विराटनगरको मेरिल्यान्ड कलेजले सम्बन्धन लिएका हुन् ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. लेयरले उक्त दुई कलेजले उत्कृष्ट शिक्षा दिइरहेको बताए । हेराल्ड कलेजको अवलोकन गर्दै उनले नेपालका दुई कलेजले विश्वविद्यालयको नै सान बढाएको उल्लेख गरे । उनले उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बन्न एउटा मात्रै कोर्षमा फोकस नगरी प्रयोगात्मक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । कलेजका विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गर्न नेपाल आएका उनले नेपाली विद्यार्थी पढाइप्रति संवेदनशील भएको उल्लेख गरे ।
हेराल्ड र मेरिल्यान्ड दुवै कलेजले चार वर्षे बीआईबीएम र तीन वर्षे बीआईटी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । हाल हेराल्डमा करीब ८ सय र मेरिल्यान्डमा ३ सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । दुवै कलेज आईएनजी ग्रूपले सञ्चालन गरिरहेको ग्रूपका अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीले बताए । बेलायतको उक्त विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष समर सिजनमा दुवै कलेजमा अध्ययनरत ५ जना विद्यार्थीलाई १५ दिने छात्रवृत्तिमा विश्वविद्यालयमा नै अध्ययन गर्ने अवसर दिने गरेको छ ।
कलेज छान्न दौडधुप
१२७०.९१ विन्दुमा नेप्से, १३ करोड बढीको शेयर कारोबार (१ बजेको अपडेट)
विकासका लागि ३ ओटै सरकार बीच सहकार्य आवश्यक : मुख्यमन्त्री पौडेल